Hallway - Alaabta guriga - Waxyoon
Khaanadaha guriga ayaa ah meesha ugu horeysa ee aad ku arki doontid adiga ama booqdehu markay soo galayaan aqalka. Taasi waa sababta ay u tahay meel wax badan kaa saabsan. Diyaarso gogoshaada si waafaqsan dhadhankaaga. Maalmahan, waxaa jira tiro badan oo hool ah oo noocyo kala duwan ah oo laga kala xusho. Waxaad ku qurxin kartaa meeshan qaab casri ah, mid caadi ah, alwaax ah ama xitaa qaab guridda ah. Intaa waxaa dheer, waxaad go'aansan kartaa midabada iyo cabbirka kabadhada iyo armaajo. Laakiin dahaadhku kaliya maahan raaxo muuqaal ah indhaha. Waxay sidoo kale qabataa hawl muhiim ah oo keydinta ah. Waxaan keydineynaa kabo sanadka oo dhan ah, dabaysha, laakiin marar badan ayaa sidoo kale waxyaabo kale oo badan. Sidaa darteed marinnada guriga iyo rugaha dharka waa qayb aad muhiim ugu ah guriga.
Meey 29, 2020 Febraayo 16, 2021 admin
Khaanadda guriga waa irridda mala-awaalka ee gurigaaga. Markaad qalabaynayso gudaha, waa inaadan iloobin hoolka, taas oo aad muhiim ugu ah xaalado badan. Waa goob aad ku keydiso jaakadaha, kabaha, waxaad ka eegeysaa muraayadda markii ugu dambeysay intaadan dunida aadin. Alaab noocee ah ayaa ka kooban hoolkaaga maxaadse ugu fadhidaa saxarada noocaas ah ee aad ku fariisato? Isticmaalka saxarada Kani waa nooc aad u ficil ah oo ah alaabta guriga, […]
Meey 28, 2020 Febraayo 16, 2021 admin
Daanyeerradu waa qalabka moodada ugu dambeeya ee hoolka ku yaal. Illaa iyo hadda, dad badan ayaan u dabacsanayn isbeddelladan, laakiin waxay durba soo galayaan guryaheena. Maxay u yihiin kuwo wax ku ool ah oo nolosheenna u fududeynaya? Waxaan kuu sheegi doonaa tan iyo wax badan oo ka mid ah qodobka soo socda. Raaxo xitaa markaad kabaha gashanayso Uma baahnid inaad lahaato qalab tayo leh oo gaar ahaan raaxo leh qolkaaga jiifka. Maxaa diidaya inaad siiso sidoo kale […]
Alaab noocee ah hoolka?
Markaad qalabaynayso aqal, waa lagama maarmaan in laga fikiro albaabka laga soo galo, sida hoolka. Thanks to alaabta guriga ku habboon, waxaad ku badbaadin doontaa booska kaliya ee dharkaaga. Soo-booqdaha ayaa ah qofka ugu horreeya ee ogaada "iridda laga soo galo". Qaab dhismeedka wanaagsan ee guriga ayaa ballaarin kara sagxadda gurigaaga isla markaana u abuuri kara sawir wanaagsan gurigaaga dadka kale. Hoolka waa inuu u dhigmaa qaabka gurigaaga. Ma haysaa […]